I-tvOS 11 inokubonelela ngeakhawunti yomsebenzisi kunye nomsebenzi weMifanekiso-kuMfanekiso | Ndisuka mac
Kukho ixesha elincinci nelincinci lokuqalisa kwenkomfa yonjiniyela elandelayo, eya kubanjwa njengesiqhelo ngoJuni, inkomfa yonjiniyela eyaziwayo. Kuyo yonke inkomfa yokuvula, iApple izakuhambisa ezona ndaba ziphambili esiza kuzibona kwiinguqulelo ezilandelayo ze-iOS, i-tvOS, i-macOS kunye ne-watchOS. IOS kwiminyaka yakutshanje, ngakumbi emva kokubhubha kukaSteve Jobs, iguquke kakhulu ngokuvula i-ecosystem kubavelisi, Into ebukho bobukho bemisebenzi endikuthandabuzayo ukuba inokwenzeka kakhulu. I-watchOS ikude kakhulu ngexeshana elifutshane ibisemarikeni. Ngoku lithuba le-tvOS, kuba iMacOS, ukunyaniseka, ayinandawo yokuqhuba.
Ukusukela oko kwafika kwintengiso yenkqubo entsha ye-Apple TV, ethe yasebenzisana nesizukulwane sesine se-Apple TV, sibonile okuncinci okanye akukho nto iguqula inkqubo yokusebenza kwebhokisi ephezulu ye-Apple, nangona zintsha ezimbalwa bafika ngeli xesha bamkelwe ngezandla ezivulekileyo, izinto zinje. Kodwa namhlanje kusenokwenzeka ukuba abasebenzisi abaninzi baphoswa ziimpawu ezithile, cIimpawu ezinje ngomfanekiso womfanekiso kunye nokusebenza kweakhawunti.
Ngokuka-Verifier, iApple inokongeza le misebenzi ibalulekileyo kuhlobo olulandelayo lwe-tvOS, inombolo ye-11, inani elicacileyo alinxibelelani nohlobo oluyilo ngokwenene. Ngokusekwe kwiitemplate ezithunyelwe kule webhusayithi, I-tvOS 11 ingasivumela ukuba songeze iiakhawunti ezahlukeneyo zomsebenzisi, iiakhawunti ezinokusivumela ukuba siqwalasele izicelo esizithandayo ngokokuthanda kwethu. Umsebenzi we-Picture-in-Picture ungasivumela ukuba sikonwabele ukusasaza iinkonzo zevidiyo okanye amajelo kwiwindows ezimeleyo njengoko sinokwenza ngoku nge-Apple iPad.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-tvOS 11 inokubonelela ngeakhawunti yomsebenzisi kunye nomsebenzi womfanekiso-mfanekiso
I-Apple ifumana imvume yemoto ezimeleyo eCarlifonia